Isisombululo esingaphakathi ngaphakathi nangaphandle
-Nkxaso yezicelo ezingakumbi
-Ingcono i-ROI (buyela kutyalo-mali)
Ubunzima bePanel 13Kg kuphela
-Ngaphezulu kwe-20% yokuKhanya kuneemveliso eziqhelekileyo
-Ukufakwa komntu omnye
Ngokukhawuleza ibhokisi yamandla enkonzo
Ukufakwa oku-1 okukhawulezileyo kunye nokuLula: Ukuxhoma okanye ukustaka ngokukhanya kunye neempawu ezincinci zenza ufakelo ngokukhawuleza kwaye kube lula.
Ukujonga i-Angle ebanzi: Zombini i-160 ° ukusuka ngokuthe tye kunye nkqo kwikona yokujonga.
Ukubona ukusuka kumacala amahlanu, iya kuba isengumfanekiso wendalo kunye ocacileyo kumboniso we-LED
Ukuphendula ngokukhawuleza kwe-Ultra: Isantya sokuphendula sidlula umda wokuphendula wamehlo ahamba ze, ngelixa sidlala isantya esiphezulu kwimifanekiso eguqukayo kwisikrini se-LED, iya kuba neenzuzo ezingaphezulu, akuyi kubakho moya kunye nokujija kwaye iya kubonelela ngokugqibeleleyo ngemifanekiso eguqukayo.
Umgangatho weBest oQinisekisiweyo: Iimveliso zethu zidlulisile izatifikethi ezininzi kubandakanya i-CE, i-FCC, i-RoSH kunye ne-SGS yokuqinisekisa kunye neeworkshop ezigugayo ezingama-300 + zeemitha zesikwere, ukuguga kwemveliso iiyure ezingama-72, ukuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
Iinkqubo zeeNkonzo eziCwangcisiweyo
2. Ukulungiswa nokuBekwa esweni kweeNkonzo (IiNkonzo ezikude)
3.Buyisela endaweni kunye nokulungisa iiNxalenye ezineziphene
Ixabiso lokuthenga alibandakanyi nayiphi na inkxaso yendawo, inkonzo okanye isondlo, kodwa eyongezelelweyo
Umba Uthotho lwe-FV Uthotho lwe-FV Uthotho lwe-FV
IPixe Pictch 3.91mm 3.91mm 4.81mm
Encapsulation ekhokelwe SMD2121 I-SMD1921 I-SMD1921
Imowudi yovavanyo 1/16 Skena 1/16 Skena 1/13 Skena
IPixe ngeSq.m nganye IPixel 65536 IPixel engama-65,536 IPixel engama-43,264
Ukuqaqamba (iiNits / ㎡) I-1100 yeNits Iinqwelo ezingama-4500 Iinqwelo ezingama-4500
Ukukhuselwa kwe-IP IP43 IP65 IP65
Iindlela zoLondolozo Ngasemva Serviceable
Ubungakanani beModyuli (W * H) 250mm * 250mm
Ubungakanani beKhabhinethi (W * H * D) 500mm * 500mm / 500mm * 1000mm
Isikali esiNgwevu I-14-16Bit
Ubunzima beKhabhinethi 7KG / 12KG
I-Angle egobileyo ± Iidigri ezili-15
2.I-Angle yokujonga ngokubanzi: Zombini i-160° ukusuka nkqo & nkqo kwikona yokujonga.
4. EyonaQinisekiso loMgangatho oQinisekisiweyo: Iimveliso zethu zigqithile kwizatifikethi ezininzi kubandakanya i-CE, i-FCC, i-RoSH kunye ne-SGS kunye nezinye ezininzi.Iworkshop yokuguga eyi-300 + yeemitha zesikwere, ukuguga kwemveliso iiyure ezingama-72, ukuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
P5.95 Rental yangaphandle LED Screen Stadium LED Vid ...
I-P4.8 yangaphakathi yeFlexible yeVidiyo yeVidiyo yoBukhoma ...
P8 yangaphandle Flexible iVidiyo yeVidiyo yoDonga loMculo Fe ...